Shirkadaha Forex-ka oo ku soo badanaya Muqdisho & Shaki xoog leh oo ka taagan - Awdinle Online
Shirkadaha Forex-ka oo ku soo badanaya Muqdisho & Shaki xoog leh oo ka taagan
Tirada shirkadaha Sarifka lacagaha qalaad ee Online-ka ah (Forex) ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho, iyadoo shaki xoog leh laga qabo qaabka ay u shaqeeyaan oo ah mid jaanta rogan ah oo aan laheyn shuruuc iyo qawaaniin lagu maamulo.
Shirkadahan oo tiradoodu kor u sii dhaaftay 150 ayaa waxaa ugu caansan illaa 42 shirkadood oo xafiisyo waaweyn ka furtay degmooyinka Muqdisho qaarkood.
“Qofkii miis, kursi iyo Laptop heli kara wuxuu furtay Forex, kadibna dad ayuu min $500 ama $1000 dollar ka aruursanaya, kadibna dalaaliin ajnabi ah oo uusan horey ula macaamilin ayuu lacagtii u dirayaa si ay ugu shaqeeyaan” ayuu yiri Prof. Max’ed ilkadahab oo ah aqoonyahan ku taqasusay dhaqaalaha oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka qaarkood.
Shirkadahan ayaa qabsaday baraha bulshada iyagoo dadka ku dhiirigeliya iney maalgeshaan si ay u helaan faa’iido bil walba joogto ah, waxaana arinta ugu yaabka badan ay ka taagan yahay iyadoo shirkadahan ay ka hadlaan faa’iido kaliya, dadkana uma sheegaan waxa dhici kara haddii uu khasaare yimaado ama ay lumiyaan lacagaha ay shacabka ka ururiyeen.
Warbixinada qaarkood ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dhalinyarada furatay shirkadahan ay khasaare Maaliyeed qabsatay, dadkii lacagaha maalgashiga ah u dhiibtayna ay qoorta iskugu jiraan markii dhowr bilood laga waayey faa’iidada laga sugayey, iyadoo ay xusid mudan tahay ineysan jirin wax damaanad ah oo dhalinyarada shirkadahan furtay ay siiyaan dadka la macaamila taasoo noqotay mushkilad dad badan shaki ku abuurtay.
“Waxaan ognahay in dad badan oo lacag laga lumiyay in arrintooda hab beeleed loo xaliyay. Waxaa kaloo igu maqaalo ah in dad badan ay hadda lacago ka xayiran yihiin, taasoo ay sababtay aqoondaro iyo shirkadihii ajnabiga ahaa ee howsha la waday oo noqday kuwo been abuur ah” ayuu mar kale yiri Prof. Max’ed Ilkadahab oo ka hadlayey qatarta ay leeyihiin shirkadahan.
Waxaa uu intaas ku daray in si ganacsigani uu u noqdo mid macno leh oo aamin ah in Dowladda Federaalka looga baahan yahay iney shirkadaha Forex dhamaantood diiwaangelin qaali ah ku sameyso, akoono uga furto Bankiga dhexe, kadibna lagu amro iney lacago dibaaji ah ku shubaan, si buu yiri lacagtaas loogu ceymiyo dadka haddii ay xoolihii lumiyaan, iyadoo shirkadii sidaas yeeli weyda laga joojinayo shaqada
Xeerar iyo habab loola macaamilo ayey Dowladaha adduunku u sameeyeen suuqan Forex marka laga reebo Soomaaliya iyo Masar, Ganacsigan faa’iido iyo khasaaraba waa leeyahay, waana in dadka lacagaha laga qaadayo sidaas wax loogu sheegaa, oo aan laga qarin” ayuu yiri Prof. Max’ed Ilkadahab.
Previous articleSidee loo soo xulayaa Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed?
Next articleShiinaha oo war ka soo saaray xaaladda muwaadininta Soomaaliyed ee ku nool Wuhan